Manje ngiphethe imishini yokulalelwayo engangiyithengile ubhaka onamasondo, isikhwama sami sezithunywa sasinzima kakhulu. Ngenkathi isikhwama sami sihleleke kahle, ngisaqhubeka nokunciphisa isisindo ngokungabi neziphindaphindo zohlobo ngalunye lwedivayisi noma isesekeli engiza naso.
I-tripod eguquguqukayo elula futhi ephathekayo kepha enemilenze emide kakhulu engiyitholile - 12 ″. Kuqinile ngokwanele ukufaka ikhamera ephelele ye-DSLR noma i-camcorder, futhi iza nenqwaba yezesekeli:
Nginokukhulu Umbhobho we-Apogee engihamba nayo ukwenza ama-podcast emgwaqeni, kepha i-tripod yayingakaze ibe yinde ngokwanele ngakho-ke ngangiyilinganisela kwezinye izincwadi - futhi yayihlala ishelela futhi ishibilika ngemilenze eyi-tripod epulasitiki. Le tripod ayinyakazi futhi ingivumela ukuthi ngibeke imakrofoni lapho ngiyidinga khona. Futhi njengoba ebiza cishe ama- $ 20, ngithenge okumbalwa - kwasekhaya, ehhovisi nakubhaka.